Soomaali / Baadhitaanka Caafimaadka Dhalaanka Skip to Main Content
Baadhitaanka Caafimaadka dhalaanka ee loo baahanyahay
Badhitaanka ilmaha da’doodu tahay 3-5 sano jir
Baadhitaanka caafimaadka dhalaanka ayaa ah mid loo baahanyahay waqtiyada galitaanka dugsiyada dadweynaha ee Gobolka Minnesota ama mudo 30 Maalmood gudahood isdiiwaangalinta fasalka barbarinta caruurta yar yar. Baadhitaanka caafimadka dhalaanka waxaa la bixiyaa sananadka oo dhan. Dhammaan carruurta saddex iyo afar sano jirka ah waa in la baadho ugu yaraan hal mar sannadkiiba. Baadhitanka caafimaadka dhalaanka ama mid la mid ah oo dhameystiran ayaa looga baahanyahay canugaaga inta uu san bilaabin Dugsiga dadweynaha ee gobolka Minnesota.
Ilmanimada hore laga bilaabo dhalashada ilaa bilowga xanaanada ilmaha yar yar waa wakhti muhiim ah oo waxbarashadooda iyo koritaankoodaba uu aad u sareeyo. Baadhitaanka caafimaadka dhalaanka waa baadhitaan deg deg ah oo fudud oo lagu ogaanaayo koritaanka iyo caafimaadka caruurta ay da'doodu u dhexeeyso saddex ilaa afar sano. Waxay tilmaamaysaa, marxalad hore, suuragalka waxbarashada ama haduu jiro walaac badan oo xaga caafimaadka ah si caruurta ay u helaan caawimaadyada ay u baahanyihiin ka hor inta aysan bilaabin Iskuulka. Baadhitaanka caafimaadka dhalaanka wuxuu taageerayaa u diyaargarowga fasalka xanaanda barbaarinta caruurta yar yar iyo caafimaad iyo natiijada koritaanka ilmaha. Baadhitaanka caafimaadka dhalaanka ma aha imtixaanka galitaanka fasalka barbaarinta caruurta yar yar ee (Kindergerthern).
Wuxuu fursad u yahay caruurta yaryar iyo qoysaskooda si ay u helaan adeegyada kala duwan iyo barnaamijyada caruurnimada hore iyo
Horumar ama taageero fahamka waalidka ee kusaabsan caafimaadka, koritaanka, iyo waxbarashada ilmahooda.
Qalabka baadhitaanka horumarineed ee Degmada 742 isticmaasho ayaa ah mid ay si toos ah oogala tashadeen waaxda caafimaadka ee Minnesota (MDH) si loogu isticmaalo barnaamijyada baadhitaanka dhameystiran ee caruurta Gobolka Minnesota oo ay ansixisay laanta waxbarashada ee Minnesota si loogu isticmaalo Barnaamijka Baadhitaanka caafimaadka dhalaanka.
Qiimaynta waxaa ka mid ah:
Baadhitaanka Koritaanka ( garashada , dhaqdhaqaaqyada koritaanka caruurta, luqadda iyo horumarka iyo koritaanka dareenka bulso)
Waxyaabaha khatarta ah ee saamaynkara waxbarashada
Udirista ama u gudbinta caymiska daryeelka caafimaadka